Waa see xaaladda xaquuqul insaanka ee Soomaaliya: Dood iyo aqoon iswaydaarsi - Ahmed Abdihadi
Waxaan hormuud ka ahaa dood iyo aqoon iswaydaarsi ku saabasan xaquuqul-insaanka iyo samaynta siyaasadaha khuseeya oo galabta ka dhacday Magaalada Moqdishu.
Doodda oo aad u heer sarraysay waxaa ka soo qaybgalay barayaasha jaamcadaha, dugsiyada sare iyo waliba hoggaanka ururada macallimiinta.Waxaa runtii aad ii soo jiitay doodaha ay soo bandhigeen ka qaybgalayaashu oo naqdi xoog badan ku sameeyay arrimaha la xiriira qaabka iyo nuxurka siyaasadaha ay hay’adaha dowalddu sameeyaan.
Siyaasadaha Soomaaliya kuma dhisno kuwa asal ah oo duruufta shacabka iyo waaqica u gaarka ah Soomaalida lagu dhisay ee kuwo dibadda laga soo amaahday oo mararka qaar ka hor imanaya dhaqan bulsheedka Soomaalida iyo baahidooda ayay u badanyihiin ayuu ku dooday mid kamid ah ka soo qaybgalayaasha aqoon iswaydaarsiga.
Sidoo kale, waxaa hoosta laga xariiqay in dadkii xuquuq insaank ilaalin lahaa ay ayagu ku xadgudbaan.
Dhibaatada Soomaaliya gaarka u ah ayaa ah in madaama dalku uu fowdo ku jiray muddo badan ay dadbadan meelka dhac ku samayn karaan xuquuda insaanka ayaga oo aan cabsi ka qabin in sharciga la hor keeno.Ilaalinta xuquuqo insaanka ayaa kamid ah waajibaadka saaran dowladaha dunida ka jira, si mujtamacaadku ugu noolaadan nolal sharaf iyo karaamo leh.
Khaladaadka Siyaasadeed ee uu Madaxwyne Farmaajo sameeyay iyo cagala la’aanta masiirka siyaasadeed!